अमेरिकाले दियो पुटिनको हत्या गर्ने चेतावनी, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
अमेरिकाले दियो पुटिनको हत्या गर्ने चेतावनी, के हुन्छ अब ?
एजेन्सी। अमेरिकी सांसद सिनेटर लिंड्से ग्राहमले रुसले युक्रेनमाथि आ’क्र’म’ण गरेको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिनको ह’त्या गर्नु पर्ने बताएपछि रुस आक्रोसित बनेको छ।
युक्रेन र रुसबीच युद्ध चर्किरहेका बेला ग्राहमले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तातामा पुटिनलाई मार्न रुसबाट कोही अघि सर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यो यु’द्ध रोकिन सक्ने बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार ग्राहमको यो भनाईले रुस क्रु’द्ध बनेको छ।
अमेरिकाका लागि रुसी राजदुतले पुटिनको ह’त्या गर्ने कुरालाई अपराध भनेका छन्। अमेरिकाका लागि रुसी राजदूत अनातोली एन्टोनोभले यसबारे अमेरिकी अधिकारीहरुले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।
तेस्तै, एक रुसी व्यवसायीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प’क्रा’उ गर्ने ‘अफिसर’लाई पुरस्कारस्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तो घोषणा गर्ने रुसका नागरिक एलेक्स कोनानिहिन पूर्वबैंकर पनि हुन्।
कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यतिर उनले रुसमा एक निजी बैंकको स्थापना गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तगत आपराधिक यु’द्ध गराएको मामिलामा पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने व्यक्तिलाई सो रकम पुरस्कार दिने उनले बताएका छन्।
उनले यसबारे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। पुटिनलाई रुसका वास्तविक राष्ट्रपति नै भन्न मिल्दैन, किनकि रुसी अपार्टमेन्ट भवन विस्फोट गरिएको विशेष अपरेसनको नतिजस्वरूप उनी राष्ट्रपति बनेका थिए ।
उनले त्यति बेला नै आफ्ना विपक्षीहरूको ह’त्या गरेर कानुन उल्लंघन गरेका थिए। त्यसैले एक जातीय रुसी र रुसकै नागरिक भएको नाताले रुसको हितलाई म आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झन्छु।
पुटिनको क्रुरताको बहादुरीपूर्ण सामना गरिरहेको युक्रेनको प्रयासलाई म सकेसम्म सहयोग गरिरहनेछु, कोनानिहिनले लेखेका छन्। उनको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा पुटिनको तस्बिर पनि राखिएको छ, जसको तल ‘वान्टेड’ लेखिएको छ।
उनले बिजनेस इन्साइडरयसँग कुरा गर्दै थप भनेका छन्, “यदि, पर्याप्त मानिसले यस्तै किसिमको विरोध प्रयास जारी राख्ने हो भने पुटिन गिरफ्तार हुने र सबैले न्याय पाउने सम्भावना बढ्नेछ ।”
भाइसका अनुसार कोनानिहिनको कुल सम्पति कुनै बेला ३० करोड डलर थियो । उनी विभिन्न टेलिभिजन सिरिजमा पनि देखिएका छन् ।उता, पुटिनले देशमा मार्सल ल फौजी शासन लागु गर्ने चर्चा व्यापक छ।
जसका कारण रुसी नागरिक समेत देश छाडेर भागिरहेको बताइएको छ। तेस्तै,लगातार आ’क्र’म’ण गरिरहेको रुसले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की देश छाडेर भागेको बताएको छ ‘। शुक्रबार साँझ जेलेन्स्की बंकरबाट भागेर पोल्याण्ड पुगेको दाबी रुशले गरेको छ ।
शुक्रवार साँझ आएको एक समाचार अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की राजधानी किभको बंकरबाट निस्किएर पोल्याण्ड भागेका छन्। यो दाबी रूसी सञ्चारमाध्यम स्पुतनिकले गरेको हो।
युक्रेनका विपक्षी सांसद इल्या किभालाई उद्धृत गर्दै स्पुतनिकले जनाए अनुसार पोल्याण्ड पुगेका जेलेन्स्कीले त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमा शरण लिएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आ’क्र’म’ण गरेको शुक्रबार नौ दिन भएको छ।
रूसी सेनाले जपोरिझिया आणविक भट्टी पनि शुक्रबार कब्जा गरेको छ। यसअघि यहाँ गोलाबारी भएको थियो। एउटा बम खसालिँदा यहाँ आगो पनि लागेको थियो। रूसका सैनिकले प्लान्टको प्रशासन र नियन्त्रण कक्षमा कब्जा गरेका छन्।
अहिले चेर्नीहिवलमा रूसले हवाई हमला गरिरहेको छ। यो हमलामा कम्तीमा ४७ जना मारिएका छन्। जेलेन्स्की भागेको समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जेलेन्स्कीले चाहेमा युक्रेनबाट एयरलिफ्ट गरिदिने सार्वजनिक रूपमा बताएको दुई दिनपछि आएको हो।
तर जेलेन्स्कीले यसको जवाफमा कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो देश नछाड्ने बताएका थिए। तर शुक्रबार जेलेन्स्की सीआईएको सहयोगमा पोल्याण्ड पुगे या अन्य उपाय अपनाए भन्ने रुसले केही खुलाएको छैन। फक्स न्युजबाट।